ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: May 2009
Kate Moss becomingaBuddhist
ကမ္ဘာကျော်မော်ဒယ်လ်ကိတ်မော့စ် ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ပြောင်းလဲခံယူဟုဆို
ကိတ်မော့စ်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ပြောင်းလဲခံယူလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ နာမည်ကျော် ဗြိတိသျှ စူပါမော်ဒယ်လ်သည် ပါတီပွဲများ၊ အပျော်အပါးများတွင် ၀ါသနာထုံခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင် ဘာသာတရားဘက်သို့ ပြောင်းလဲအာရုံစိုက်လာပြီး စိတ်၏ ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်မှုကို ရှာဖွေရန် တရားထိုင်သော အလေ့အကျင့်ကိုလည်း ဂရုတစိုက် ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။ သူမနှင့် ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေများက “ကိတ်က တကယ့်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်သွားပါပြီ။ သူက ဗုဒ္ဓကြေးဆင်းတုတစ်ဆူကို ပင့်ဆောင်ကိုးကွယ်နေပါတယ်။ အမြင့်(၄)ပေ၊ အနံ(၂)ပေရှိတဲ့ ရုပ်ပွားတော်ဟာ ခုဆိုရင် သူ့ရဲ့ဧည့်ခန်းထဲမှာ တင့်တင့်တယ်တယ် စံပယ်နေပါပြီ”ဟု ပြောကြားခဲ့ကြသည်။ “ကိတ်က တရားထိုင်ရတာ၊ ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမတွေကို ကြားနာနေရတာဟာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျှော့ချပေးလိုက်တယ်လို့ ခံယူထားပါတယ်။ ခုဆိုရင် သူဟာ အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုကို ဗုဒ္ဓဘာသာကတဆင့် ရှာတွေ့သွားပါပြီ”ဟု အသက်(၃၅)နှစ်အရွယ် မော်ဒယ်လ်၏ မိတ်ဆွေများက ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုအခါ မော့စ်သည် သူမ၏ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု အသစ်ဖြစ်လာသည့် ဘာသာတရားအတွက် မိတ်ဆွေများကို အတွေ့အကြုံ ဝေမျှနေသော်လည်း အချို့ကိစ္စများတွင် အဆင်မပြေသေးကြောင်း သိရသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မော့စ်သည် ဗုဒ္ဓဆင်းတုရှေ့တွင် အမွှေးတိုင်များ ထွန်းညှိပူဇော်ပြီး သူမ၏ မိတ်ဆွေများအား အတူတကွ ၀တ်ပြုရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သော်လည်း အများစုသည် အမွှေးတိုင်နံ့ကြောင့် ချောင်းဆိုးနေကြကြောင်း မော့စ်နှင့်နီးစပ်သည့် အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ မော့စ်ကမူ သူမ၏ အပျော်အပါးမက်မှု၊ အနုပညာနယ်ပင်တွင် ကြုံတွေ့ရသည့် ဖိအားကြီးမားမှုများကို ဗုဒ္ဓ၏ ဒေသနာတော်များဖြင့် ဖြေဖျောက်ကုစားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
The supermodel - famed for her wild partying - is reportedly showing an increasing interest in the religion and has started meditating inabid to gainasense of calm.
A source said: "She's really into Buddhism and hasaboughtabronze Buddha. The 4ft by 2ft statue has pride of place in her living room.
"Kate wants to de-stress and is enjoying taking time out to meditate and learn about Buddhism. She finds it calming."
The British beauty is keen for her friends to share her new interest but is not having the response she hoped for.
The source added to Britain's Daily Mirror newspaper: "She lights sandalwood incense sticks in front of the statue and makes her friends do the same. The problem is that everyone just sits choking on the fumes."
Those close to Kate - who hasasix-year-old daughter Lila Grace - are said to be hoping Buddhism can help curb her wild ways.
Last week, it was reported her friend and mentor, Topshop tycoon Sir Philip Green, warned the 35-year-old star to start behaving more responsibly.
A source revealed: "Philip told her straight she's partying too hard. He told her she needs to look after herself for her own good and warned she's ruining her looks with the alcohol.
"He won't take any nonsense - he's said if she lets her partying spiral out of control she'll end up back in rehab and she's old enough to know better."
Posted by Unknown | at 11:21 AM |0comments
Labels: news : internet, news:Planet Journal
ဒါတွေကိုမမေ့မှ စိတ်ချမ်းသာမယ် ။
(၁) ငါဟာ ငါ့ဘ၀မှာ အရေးပါတဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ငါ့မိသားစုဘ၀မှာလည်း အရေးပါတဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ငါ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာလည်း အရေးပါတဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ဘာတွေ လုပ်ပေးနိုင်လို့ အရေးပါတာလဲ။ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား လုပ်ပေးနိုင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သွားရင်းလာရင်းနဲ့ စိတ်ချမ်းသာစရာလေးတွေကို ငါ ပြောနိုင်တယ်။
ငါ့ဘ၀မှာ ငါဟာ အရေးအပါဆုံးလူ မဟုတ်ရင် ဘယ်သူက ငါ့ဘ၀မှာ အရေးအပါဆုံး ဖြစ်မလဲ။ ငါဟာ ဘာမှ အသုံးမကျတဲ့သူလို့ ငါ့ကိုယ်ငါ သဘောထားရင်ဘယ်လိုလုပ် စိတ်ချမ်းသာမလဲ။ ဘယ်လိုလုပ် စိတ်အားတက်မလဲ။
(၂) ငါ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဒုက္ခမပေးမိအောင် သတိထားတယ်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဒုက္ခပေးနေကြရင် ဒီလောက်လူတွေများတဲ့ လောကကြီးမှာ ဘယ်နေလို့ ဖြစ်တော့မလဲ။ ဒါကြောင့် စိတ်ချမ်းသာမှုမပေးနိုင်ရင် ရှိပါစေတော့ စိတ်ဆင်းရဲမှုတော့ မပေးမိအောင် သတိထားပါတယ်။
အကောင်းဆုံးသဘောထားနဲ့ ဆက်ဆံမယ်။ ငါနဲ့တွေ့ရတဲ့ လူတွေဟာ ငါ့လိုပဲ ဘ၀ကို ရုန်းကန်ပြီး နေသွားကြတယ်။
စေတနာနဲ့ လုပ်မယ်။ မတတ်နိုင်တာကို မတတ်နိုင်ဘူးလို့ သဘောထားမယ်။ အဲဒီလို မတတ်နိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲမခံဘူး။
(၆) ဒီနေ့ အကူအညီလိုတဲ့ ငါ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကို အကူအညီပေးမယ်။ လူ့ဘ၀မှာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အကူအညီပေးပြီးနေသွားမှ အားလုံး အဆင်ပြေမယ်။ ငါကလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ အကူအညီမပေးဘူး။ ဘယ်သူ့ဆီကမှလည်း အကူအညီ မယူဘူး ဆိုပြီး နေလို့ မဖြစ်ဘူး။
(၁၀) ငါဟာ ငါ့ရဲ့ အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်သလို အဆိုးဆုံးရန်သူလည်း
ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူများက ငါ့ကို နေရာမရွေး အချိန်မရွေး ဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူး။
(၁၁) ဘယ်လိုသဘောထားရင် စိတ်ချမ်းသာမယ်။ ဘယ်လိုတွေးရင် စိတ်ချမ်းသာမယ်။ ဘာလုပ်ရင် စိတ်ချမ်းသာမယ်။ ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းရင် စိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုတာကို အမြဲ လေ့လာရမယ်။ စိတ်ချမ်းသာတဲ့ သူတွေကို လေ့လာမယ်။ အဆင်ပြေနေတဲ့သူတွေကို လေ့လာမယ်။
(၁၅) ကိုယ့်စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ ခံစားမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်သူ့မှာမှ တာဝန်မရှိဘူး။ ငါ့စိတ်ကိုငါ ချမ်းသာအောင် ထားနိုင်တယ်။ ငါ့စိတ်ချမ်းသာမှုကို သူများ ဖျက်ဆီးလို့ မရဘူး။ ငါစိတ်မချမ်းသာရင် အဲဒါ ဘယ်သူ့မှာမှ တာဝန်မရှိဘူး။ ငါ့စိတ်ချမ်းသာမှုဟာ ငါ့တာဝန်ပဲ။ ငါဒုက္ခရောက်တာ သူတို့ကြောင့်လို့ တွေးသလား။ အဲဒီလို တွေးနေရင် စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်။ စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူ မဖြစ်သေးဘူး။ ငါ့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ ခံစားမှုအတွက် ငါ့မှာပဲ တာဝန်ရှိတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်တင်ဖို့မလိုဘူး။ အဲဒီလို သဘောထားကို ပြတ်ပြတ်သားသား ထားနိုင်တဲ့သူဟာ စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူ။ ငါ့ကို စိတ်ဆင်းရဲအောင် လုပ်ကြတယ်။ ငါ့ကို စိတ်ဆင်းရဲအောင် မလုပ်ကြနဲ့လို့ ပြောတဲ့သူဟာ စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့သူ။
Posted by Unknown | at 3:58 AM |0comments
ကွေ.ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကောင်စီ ( GCC ) ခြောက်နိုင်ငံမှသဘောတူသတ်မှတ်
၅၀ % အထိရှိကြောင်းဒါကြောင်.မို.ဗဟိုဘဏ်ဟာမိမိတို.နိုင်ငံမှာထားရှိသင်.ကြောင်း
ထိုအာရပ်ဗဟိုဘဏ်စီမံကိန်းကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာယူအေအီးနိုင်ငံကပဲစတင်အဆိုပြုခဲ.
တစ်ခုဖန်တီးရန်သဘောတူခဲ.ကြပြီးထိုအစီအစဉ်မှအိုမန်နိုင်ငံက ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်နှုတ်
ရေနံသူဌေးဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ. ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွက်ဂျီဒီပီက ၄၈၁ ဘီလီယံဒေါ်လာဖြစ်
ပြီးယူအေအီးနိုင်ငံကတော. ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွက်ဂျီဒီပီက ၂၆၀ ဘီလီယံဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
ABU DHABI/DUBAI — The UAE, the Arab world’s most diversified and second-largest economy after Saudi Arabia, said on Wednesday that it would not participate inaproposed monetary union agreement between the member states of the Gulf Cooperation Council (GCC).
Analysts said the UAE decision could dealafatal blow to the GCC’s goal of establishingaEuropean-style common currency,aproject that has faced hurdles for almostadecade. The news sent onlyaripple through the region’s financial markets, with executives and analysts saying the announcement would have no major impact on the UAE economic outlook and business environment.
State news agency Wam quoted the Governor of the UAE Central Bank, Sultan Nasser Al Suwaidi, as saying that the UAE will continue to maintain its expansionary monetary policy, without change, and that, therefore, it will keep the dirham’s exchange rate pegged to the US dollar.
An official at the UAE Foreign Ministry said that the General Secretariat of the GCC was officially notified on Wednesday of the decision. No senior official at the GCC Secretariat, in the Saudi capital Riyadh, was available for comment.
“The UAE extends its best wishes for success to those GCC member states who will join the monetary union agreement, “ the UAE official said.
The move came after the UAE had expressed reservations overaMay5decision to base the Monetary Council,aprecursor toacommon GCC central bank, also in Riyadh.
The UAE was the first country to officially request, in 2004, the hosting of the planned Central Bank of the GCC as part of the arrangements for entry into the Council’s monetary union, Wam said. The UAE does not currently host any organisation or body affiliated with the GCC, it said.
The UAE will continue to act in the best interest of the citizens of the GCC member states and will also carry out its role asafounding member of the Council, to help it to achieve its mission and goals, the official told Wam.
The UAE became the second country in the six-member GCC to withdraw from the policy convergence and single currency plan after Oman, in December 2006. Kuwait had also complicated the plans by dropping its peg to the US dollar in 2007. The other member states have maintained the dollar peg, so far.
Some analysts warned that the UAE’s decision could alter the economic and political dynamics in the Gulf region, and could be interpreted asasign of how the balance of power between Saudi Arabia and the smaller, richer GCC states has shifted over time.
Posted by Unknown | at 12:55 AM |0comments
Labels: သတင်း၊khaleej time
Devotees Worship Wild Boars
ပူဇော်ပသနေကြပါတယ်တဲ. ...ကမ္ဘာနဲ.အ၀ှမ်းဖြစ်နေတဲ.၀က်တုပ်ကွေးရောဂါကိုတောင်
ကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံထုတ် The Sun သတင်းစာကဖော်ပြခဲ.ပါတယ်...
သြော် ... လော ဘ လော ဘ .....
Thousands of Malaysian Hindus are seeking blessings fromagroup of wild
boars believed to possess magical powers, shruging off concerns aboutaglobal
The sun newspaper reportedaHindu temple in the north-western
Malaysian state of Perak has been drawingasteady stream of thousands of
visitors daily, eagar to feed and touch dozens of wild boars.
The boars , which started to appear near the temple about
a year ago , are believed by devotees to possess magical
powers and can bring good luck.
Among the busloads of devotees and visitors from as far away as
Singapore and Thailand are lottery punters hoping that the boars' good
luck will rub off on them.
" It isamiracle, so it is okay, " said one devotee.
Posted by Unknown | at 1:28 AM |0comments
Labels: news : internet
လက်ဝွေ.ပွဲအတန်းကန်.သတ်ချက်များ Weight Category
Fly Weight ( ဖလိုင်းဝိတ် ) = 112 LBS
Bantan Weight ( ဘင်တန်ဝိတ် ) = 118 LBS
Feather Weight ( ဖဲသာဝိတ် ) = 126 LBS
Light Weight ( လိုက်ဝိတ် ) = 135 LBS
Welter Weight ( ၀ယ်လ်တာဝိတ် ) = 147 LBS
Middle Weight ( မစ်ဒယ်ဝိတ် ) = 160 LBS
Light Heavy Weight ( လိုက်ဟဲဗီးဝိတ် ) = 175 LBS
Heavy Weight ( ဟဲဗီးဝိတ် ) = 200 LBS
ထားတဲ.ဇယားထဲမှာမပါသေးတဲ. Light Welterweight Class ပါတဲ.ဗျာ...အဲဒီအတန်းမှာ
ကိုယ်အလေးချိန်က 63.5 kg သို.မဟုတ် 140 pound ( ပေါင် ၁၄၀ ) ပါတဲ.ခင်ဗျာ....
ထောက်လက်သီး = Jab
၀ိုက်လက်သီး = Hook
ဖြောင်.လက်သီး = Straight
ပင်.လက်သီး = Uppercut
အလဲထိုးသည်/ ပွဲ = Knock out
Posted by Unknown | at 12:18 AM | 1 comments
စေတီတော်ပရ၀ဏ်တစ်ဝိုက်ကားယခင် '၉၀ ကျော်ခုနှစ်များကအခြေအနေထက်များ
များမှာဒေသခံများပုံစံမဟုတ်သည်.စစ်တပ်(သို.မဟုတ်) ရဲ သို.မဟုတ်အဖွဲ.အစည်း
( ဤသည်ကားကိုယ်တိုင်လည်းကြုံတွေ.ခဲ... အခြားကျိူက်ထီး
ဘယဆေးဆိုင်( ဘလော.ဂ်ဂါကိုနေစိုးနိုင်အတွက်များဖွင်.ထားလေသလား ..)
သနည်း ? တစ်ခါကဖြစ်ပွားခဲ.ဖူးသောကျိူက်ထီးရိုးစေတီရင်ပြင်နှင်.ဆိုင်ခန်းများသို.သူပုန်
Posted by Unknown | at 8:38 AM | 1 comments
What's left to eat !!!
နွားရူးရောဂါ တဲ. ....
ဒီမှာကြည်. ...အချက်ပို ( စဉ်းစားစရာအချက်အလက်တွေပိုလို.စိတ်တင်းကြပ်နေတာ)
forward mail ထဲမှာတွေ.မိတာလေးပါ....
တက်တဲ.နိုင်ငံတွေကသိကုန်လို. ဓာတုဗေဓဓါတ်မြေသြဇာနဲ.ပိုးသတ်ဆေးမသုံးတဲ. Organic
Smoke or Get Burnt: Chinese County Tells its Officials
မျက်စေ.လည်သွားပါသလားမိတ်ဆွေ ? ... ကျွန်ုပ်တို.သိထားသည်.ယေဘုယျအချက်
ထမ်းများအနေဖြင်.တစ်နှစ်လျှင်စီးကရက်ဘူးပေါင်း ၂ သိန်းခန်.၀ယ်ယူသောက်သုံးကြရန်အမိန်.
အားပြည်နယ်ထုတ်စီးကရက်ဘူးပေါင်း ၂ သိန်း ၃ သောင်းကိုတစ်နှစ်အတွင်းသုံးစွဲရမည်ဟု
အမိန်.ပေးခဲ.သည်ဟု Global Times သတင်းစာကဆိုပါသည်။ အဆိုပါလျာထားချက်ကိုမပြည်.
တရုတ်ပြည်တွင်စီးကရက်အစွဲအမြဲသောက်သုံးသူပေါင်းသန်း ၃၅၀ ရှိပြီး၎င်း
ဖော်ပြခဲ.သေးသည်။ ( သူတို.လည်းအခုတစ်မျိူး၊တော်ကြာတစ်မျိူးလုပ်တတ်တာပဲ..)
တယ်...( ဆရာဝန်မပါ လို.များပြောလေမလားပဲ...)
Officials inacounty in cen tral China have been told to smoke nearlyaquarter million packs of locally made cigarettes annually or risk being fined, state media reported on Monday.
China has 350 million smokers, of whomamillion die of smoking-related diseases every year. More than half of all male doctors in China smoke, but the government is now trying harder to get them to kick the habit in order to set an example for others, state media reported recently.
Posted by Unknown | at 11:50 PM | 1 comments
Labels: News: Khaleef Times
ကြည်.လေ...) မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူသောသုတ္တန်ပိဋကတ်တော်လာ ကောသ
လမင်းကြီး၏အိပ်မက် ၁၆ ချက်မေးမြန်းချက်ကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားထားသည်.ကော
သလအိပ်မက် ၁၆ ချက်တရားတော်မြန်မာပြန်စာတမ်းကိုအင်တာနက်မှာမွေနှောက်ဖတ်မိ
ဦးပိုင်းကလို.ထင်ပါသည်။ အခုတော.ဆရာတော်ဘုရားလည်းမရှိတော.ပြီ။ တရားခွေများလည်း
အခုတော.လွန်ခဲ.သောနှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်ကဘုရင်တစ်ပါးရဲ.အိပ်မက်ရှည်ကြီးကို ( သူ
လည်းမှတ်မိပါပေရဲ. ..) မြတ်စွာဘုရားရဲ.ဥာဏ်တော်နှင်.ဖွင်.ပြဟောကြားခဲ.တဲ.အနာဂတ်
Posted by Unknown | at 11:45 AM |0comments
ကောသလအိပ်မက် ၁၆ ချက် အမှတ် (၂ )
(၅) ခံတွင်း နှစ်ခုရှိသော မြင်းသည် ကျွေးလာသော မုယောစပါး စသည်တို့ကို ခံတွင်းနှစ်ခု
ဖြင့်ပင် စားသည်ဟု မြင်မက်ပါသည်။
နောင် တရားမစောင့်သော မင်းတို့လက်ထက်၌ တရားမစောင့်သော တရားသူကြီးတို့
သည် နှစ်ဖက်သော အမှုသည်တို့မှ ပေးသော တံစိုးလက်ဆောင်တို့ကို စား၍ အမှုတို့ကို
(၆) အဖိုးတသိန်း ထိုက်သော ရွှေခွက်ကို မြေခွေးဖိုအား ကျင်ငယ်စွန့်ရန် ပေး၏။ မြေခွေး
လည်း ထိုရွှေခွက်၌ ကျင်ငယ်စွန့်သည်ဟု မြင်မက်ပါသည်။
နောင် တရားမစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ အမျိုးမြတ်သော သူတို့သည် အချီး
အမြှောက် မခံရ၊ ဆင်းရဲကြ၍ အမျိုးယုတ်သော သူတို့ အစိုးတရ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာ
ကြလတ္တံ့။ ထိုအခါ အမျိုးမြတ်တို့ အသက် မွေးခြင်းငှာ မတတ်နိုင်ကုန်သည် ဖြစ်၍ မိမိတို့
သမီးတို့ကို အမျိုးယုတ်တို့အား ပေး၍ အသက်မွေး ကြကုန်လတ္တံ့။
(၇) တယောက်သော ယောင်္ကျားသည် အင်းပျဉ်၌ ထိုင်လျက် လွန်ကို ကျစ်၍ ခြေရင်း၌
ထား၏။ ထို အင်းပျဉ်အောက်၌ရှိသော ဆာလောင်သော မြေခွေးမသည် ထိုယောင်္ကျား
မသိစဉ်လျှင် ထိုလွန်ကို စား၏ ဟု မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ မိန်းမတို့သည် အစားအသောက်၊ အဝတ်၊ အနေအထိုင် စသည်တို့၌ လော်
လည်ခြင်း ရှိ၍ မိမိတို့ လင်ယောင်္ကျားသည် ဆင်းရဲငြိုငြင်စွာ ရှာဖွေ စုဆောင်းအပ်သော
ဥစ္စာ ပစ္စည်းတို့ကို အဝတ်အစား၊ အစားအသောက် တို့၌ လည်းကောင်း၊ သောက်စား
ကစားခြင်းတို့၌ လည်းကောင်း၊ အပျော်အပါးတို့၌ လည်းကောင်း၊ သဘောက် လင်ငယ်
ထားခြင်း တို့၌ လည်းကောင်း အရမ်းမဲ့လျှင် ဖြုန်းတီးလေလတ္တံ့။ ခွေးမသည် မသိ စဉ်းစား
သကဲ့သို့ အိမ်သူ မိန်းမတို့သည် ဤသို့ တိတ်တဆိတ် ဖြုန်းတီး ခိုးစားကြလတ္တံ့။
(၈) ရေမရှိသော အိုးတို့ဖြင့် ခြံရံအပ်သော ရေပြည့်အိုးကြီး တလုံးကို မြင်ရ၏။ လူတို့သည်
အရပ် ၈ မျက်နှာမှ ရေကို ယူလာကြ၍ ထိုရေပြည့်အိုးကြီး အတွင်းသို့သာလျှင် လောင်း
ထည့် ကြ၏။ လောင်းထည့်သော ရေတို့သည် ပြည့်လျှံ၍ ကျကုန်၏။ ဤသို့လျှင် အဖန်
တလဲလဲ ရေပြည့်အိုးသို့သာ လောင်းလျှက် ရေမရှိသော အခြံအရံ အိုးတို့ အတွင်းသို့ကား
မည်သူမျှ မလောင်း မထည့်ပဲ နေသည်ကို မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ မကောင်းသော မင်းတို့ လက်ထက်၌ မင်းနှင့်တကွ လူတို့ တရားပျက်
ကွက်၊ သြဇာညံ့ဖျင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းသို့ ရောက်ကြကုန်လတ္တံ့။ ထိုအခါ မင်းအစိုးရတို့
သည် ဆင်းရဲသားတို့အား မင်း၏ အကျိုးစီးပွား အတွက်ကိုသာ လုပ်ကိုင်စေအံ.။
ဆောင်ရွက် စေအံ။ ထမ်းရွက်စေအံ။ သို့ဖြစ်ရကား မင်းတို့၌သာ ပြည့်စုံ အကျိုးခံစား
ကြရ၍ ဆင်းရဲသားတို့မှာ ရေမရှိသော အိုးတို့ပမာ တစုံတရာ မရှိ ငတ်မွတ် ခေါင်း
(၉) နက်ရှိုင်း ကျယ်ဝန်းသော ရေကန်ကြီး တခုတွင် သတ္တဝါတို့ ဆင်း၍ ရေသောက်ကြ၏။
ကန်၏ အလယ် ရေနက်ရာ၌ ရေသည် နောက်၍ ကန်နားဝန်းကျင် ရေတိမ်ရာ သတ္တဝါတို့
နင်းရာ၌ ရေသည် ကြည်လင်၏ဟု မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ တရားမစောင့်သော မင်းတို့သည် မတရား အုပ်စိုးခြင်း၊ တံစိုးစားခြင်း၊
လော်လည်ခြင်း၊ သနားညှာတာ ဂရုဏာ မဲ့ခြင်း၊ ကြမ်းကြုတ် ရက်စက်ခြင်းတို့ ရှိ
လျှက် လူတို့အပေါ်၌ အထူးထူး အပြားပြားသော အချင်းအရာဖြင့် အခွန်အတုတ်
တို့ကို ခွဲခန့် ကောက်ယူလတ္တံ့။ ထိုအခါ လူတို့မှာ တစ်စုံတစ်ရာ
မပေးဆောင်နိုင် ပင်ပန်းဆင်းရဲလျက် မြို့ကြီးရပ်ကြီးတို့၌ မနေနိုင်ပဲ ရပ်စွန် ပြည်
နားသို့ သွားရောက်နေကြရသည် ဖြစ်လတ္တံ့။ ကန်အလယ်တွင်နောက်၍ ကန်ဘေး
တွင် ကြည်သကဲ့သို့ မြို့လယ်ရွာလယ်၌ တိတ်ဆိတ်၍ ရပ်စွန်ပြည်နား၌ လူစည်ကားလတ္တံ့။
(၁၀) တစ်လုံးတည်းသော အိုးဖြင့် တချိန်တည်းချက်သော ထမင်းသည် အချို့ပျော့၏၊
အချို့ မနပ်၊ အချို့နပ်၏။ ဤသို့ မြင်မက်ပါသည်။
နောင် တရား မစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ မိုးကွက်ကြား ရွာလတ္တံ့။ ထို
အခါ အချို့နေရာ၌ မိုးရွာလွန်း၍ ကောက်ပဲသီးနှံ ပျက်အံ။ အချို့နေရာ၌ မရွာ
၍ ပျက်အံ။ အချို့နေရာ တွင်ကား မိုးမှန်၍ ကောင်းအံ။ ဤသို့လျှင် ထမင်းအိုး
တွင် မြင်သော ထမင်းကဲ့သို့ ကောက်ပဲသီးနှံ သုံးထွေ ပြားလတ္တံ့။
(၁၁) အဖိုးတသိန်းထက်သော စန္ဒကူးနှစ်ကို ယက်တက်ပုပ်ရည်ဖြင့် ရောင်းစားသည်
နောင်အခါ ငါဘုရား၏ သာသနာတော် ဆုတ်ယုတ်သော ကာလတွင် လော်
လည်၍ လာဘ်လာဘကို မက်မော ကုန်သော ရဟန်းအလဇ္ဇီ လူအလဇ္ဇီတို့သည်
ကျောင်း၊ သင်္ကန်း ဥစ္စာပစ္စည်း စသည် တို့ကို အလိုရှိကုန်သည် ဖြစ်၍ လမ်းခရီးဆုံ၊
အိမ်ဝ၊ အိမ်ကြို အိမ်ကြားတို့၌ ငါဘုရား၏ တရားတော်ကို ဟောကြားလတ္တံ့။ နိဗ္ဗာန်
အလို့ငှာ ဟောတော် မူအပ်သော အလွန် မွန်မြတ်သော တရားတော်ကို တစ်ပဲ၊ တစ်မူး၊
တစ်ကျပ် စသည်တို့ အကျိုးငှာ ရောင်းစား ဟောပြော ကြသည် ဖြစ်၍ တသိန်းထိုက်
သော စန္ဒာကူးနှစ်ကို ယက်တက်ပုပ်ရည်ဖြင့် ရောင်းစား သကဲ့သို့ ဖြစ်ကုန်လတ္တံ့။
နေပါတော.သည်။ တစ်ရားပွဲတစ်ည သိန်းနှင်.ချီပြီးတောင်းကြ၊ရကြသည်။ထိုတရားခွေများသည်
နောင်အခါ တရား မစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ အမျိုးယုတ်သော သူတို့
ကိုသာ ရာထူး စည်းစိမ် ပေးသည် ဖြစ်၍ အမျိုးယုတ်တို့ တန်ခိုး အာဏာ ကြီးမား
ထင်ပေါ် အရာရာတွင် တွင်ကျယ်လျက် ၄င်းတို့ စကားသာလျှင် ဘုးတောင်း နစ်
သကဲသို့ နစ်၍ တည်ကုန်လတ္တံ့။
နောင်အခါ တရား မစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ တော်မှန် လိမ္မာ ပညာရှိ
သောသူတို့၏ စကားသည် မည်သည့် အရာ၌ မဆို လေးသော ကျောက်ဖျာ ရေ
တွင် ပေါ်သကဲ့သို့ နစ်တည် ခြင်းမရှိ၊ မခိုင်မမြဲ ရှိကြကုန် လတ္တံ့။
နောင်အခါ လူတို့သည် ပြင်းသော ရာဂ ရှိကုန်သည် ဖြစ်၍ ကိလေသာ အလိုသို့
လိုက်လျက် ငယ်ရွယ်ကုန်သော မယားတို့၏ အလိုသို့ လုံးဝ လိုက်ကြကုန် လတ္တံ့။
အလုပ်အကိုင်မှု၊ ဥစ္စာ ပစ္စည်းမှု၊ ကျေးကျွန်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု စသော အရပ်ရပ်တို့၌
လင်ပေါ်တွင် လွှမ်းမိုး အုပ်စိုးခြင်းကို ပြုကြမည် ဖြစ်ရကား ဖားငယ်မသည် အ
ဆိပ်လျင်သော မြွေကို စားမျိုသကဲ့သို့ ဖြစ်ကုန်လတ္တံ့။
(၁၅) မည်းနက် ရုပ်သွင်၊ အဆင်း ဆိုးဝါးသော ကျီးတို့ကို ရွှေ၏ အဆင်းနှင့် တူသော
ရွှေဟင်္သာ တို့က ခြံရံ နေကြသည်ကို မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ အားနည်းသော မင်းတို့ လက်ထက်၌ ထိုမင်းတို့သည် ဆင်စီး မြင်းစီး
စသောအတတ်တို့၌ မလိမ္မာ၍ စစ်ထိုးခြင်း၌ မရဲရင့်ဘဲ ဖြစ်ကြကုန်လတ္တံ့။ ထိုအခါ
တိုင်းပြည် နိုင်ငံဆုံးရှုံးမည်ကို စိုး၍ တူသော ဇာတ်ရှိသော သူကောင်းသား တို့အား
အစိုးရခြင်းကို မပေးမူ၍မိမိတို့ထံ၌ ခစား ကြကုန်သော အမျိုး ယုတ်သော ကျေး
ကျွန်တို့အားသာ ပေးကုန်လတ္တံ့။သို့ဖြစ်၍ အမျိုးကောင်းသားတို့ ကိုးကွယ်ရာ မရှိပဲ
အစိုးရခြင်း၌ တည်ကုန်သော အမျိုးယုတ်တို့ထံ၌ ခစားကြကုန် လတ္တံ့။
(၁၆) ဆိတ်တို့သည် သစ်ကို သတ်စားကြသဖြင့် သစ်တို့သည် ကြောက်လန့်လျက် ဆိတ်တို့
ကို အဝေးမှ မြင်လျှင်ပင် တောချုံရှိရာသို့ ပြေးကြသည်ကို မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ တရား မစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ အမျိုးယုတ်သော သူတို့ အစိုးရ
ကုန်သည် ဖြစ်၍ အမျိုးမြတ်သူတို့ မထင်ရှား ဖြစ်လတ္တံ့။ အမျိုးယုတ် သူတို့မှာ မင်းကျွမ်းဝင်
သည် ဖြစ်၍ တရားရုံးတို့၌ သြဇာအာဏာ လွှမ်းမိုးလျက် အမျိုးမြတ်သူတို့၏ ဘိုးဘပိုင်
လယ်မြေ ဥစ္စာ အရပ်ရပ်တို့ကို ငါတို့ လယ်မြေဥစ္စာ ဖြစ်သည်ဟု သိမ်းယူကြ၍ တရားတ
ဘောင် ဖြစ်လျှင် တန်ခိုးမဲ့သူတို့အား ဖိနှိပ်ပုတ်ခတ် ခြိမ်းခြောက် နှင်ထုတ်လျက် အနိုင်
ကျင့် ကြကုန်လတ္တံ့။ ထိုအခါ အမျိုးမြတ်သူတို့ ကြောက်လန့် စက်ဆုတ်ကုန်သည် ဖြစ်၍
လယ်ယာ ဥစ္စာတို့ကို ပေးအပ်ကုန်လျက် အိမ်သို့ပြန်၍ အိပ်နေကြကုန်အံ။ ထိုမှ တပါးလည်း အကျင့်သီလရှိသော ရဟန်းတို့သည် အကျင့်သီလမဲ့သော ရဟန်းတို့က ချုပ်ချယ် ဖိနှိပ်ကြ
လေသဖြင့် တောသို့ ပြေးဝင် ပုန်းအောင်း ကြကုန်လတ္တံ့။ ဤသို့လျှင် အမျိုးကောင်း၊ သူ
တော်ကောင်း တို့လည်း လွတ်ရာ ကျွတ်ရာ တောတောတောင်တောင် တို့ကို ပြေးပုန်း
Posted by Unknown | at 11:32 AM | 1 comments
အောက်မှာအဲဒီသတင်းအကြောင်း timesonline မှာပါလာတာပါ။
American man arrested in lake outside Aung San Suu Kyi's home
An American man has been arrested in Burma after allegedly spending three nights at the home of Aung San Suu Kyi, the country's detained opposition leader.
John William Yeattaw, 53, was fished out of the Inya Lake in Rangoon early yesterday after returning fromavisit to Ms Suu Kyi's lakeside home, according to the Myanma Ahlin newspaper. He had confessed to swimming across the lake on Sunday evening and sneaking into her home, the newspaper reported.
Today, more than 20 police entered Ms Suu Kyui's compound, where she has been kept under house arrest for more than 13 of the past 19 years. The compound is tightly guarded and she is not allowed visitors, apart from her doctor.
"He secretly entered the house and stayed there," the newspaper reported, saying that Mr Yeattaw swam with an empty five-litre plastic water jug, presumably to use asafloat.
Police confiscated his belongings, including an American passport,acamera,apair of pliars and $100 along withablack backpack. His motive remained unclear.
A spokesman from the US Embassy in Rangoon said that he was trying to get details of the arrest.
"The embassy has not yet been informed by authorities and we don't know anything about it," the spokesman said.
It is the first time that an outsider has managed to get into Ms Suu Kyi's compound or swum across the lake to her home. Swimming in the vicinity of her compound is forbidden.
Earlier this week, Burma's junta rejected an appeal to free Ms Suu Kyi, whose most recent period of detention is due to expire on May 27.
Nyan Win, spokesman for the National League for Democracy, which Ms Suu Kyi leads, said that the country's military authorities summonedamember of Ms Suu Kyi's legal team to the administrative capital of Naypyidaw last Friday and handed overaletter rejecting the appeal for her release.
Mr Win said that he was still hopeful Ms Suu Kyi would be freed later this month when her six-year detention expires, although there were no indications that she would be released.
Posted by Unknown | at 11:11 AM |0comments
ကိုက်ဖြတ်မိလိုက်ကြောင်း5ရက်နေ.ထုတ်စင်္ကာပူတရုတ်သတင်းစာ Sin Chew Daily
အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိအမျိူးသမီးသည်အလုပ်ချိန်အပြီးတွင်သူမ၏သူဌေးနှင်.ပန်း
ထိုစုံထောက်ကပြောကြားရာမှာ " ကျွန်တော်သူမနဲ.သူမသူဌေးနောက်ကိုနောက်
နေတဲ.အဲဒီအမျိူးသမီးရဲ.ငယ်သံပါအောင်အော်သံကိုကြားလိုက်ရတာပါပဲ " လို.ဆိုပါသည်။
( သတိကားနောက်ဆုတ်မယ်.... )
he daily reported that the incident occurred inaSingapore park where the couple met after work.
Labels: news : The Star
You'reatext machine ... royal rompers Joy Taylor and Phil Carden
အရက်မူးနေသောချောမောလှပသည်.အသက် ၃၅ နှစ်ရှိ ရွေအိုရောင်ဆံပင်ပိုင်ရှင်
Joy Taylor နှင်.အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိမဟာနဖူးနှင်.ခန်.ငြားသောပျိူတိုင်းကြိုက်သည်.
နှင်းဆီခိုင် Phil Carden တို.နှစ်ဦးအရက်များအလွန်အကျွံမူးပြီးကမ္ဘာလှည်.ခရီးသည်
၄င်းတို.နှစ်ယောက်စလုံးမှာအမေရိကန်တွင်မွေးဖွားခဲ.ကြပြီး Joy ကတော.အင်တာနက်ဆိုင်
ရာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီး Phil ကတော.၀န်ထမ်းရွေးချယ်ရေးကုမ္ပုဏီတစ်ခုရဲ.ညွန်ကြားရေးမှူတစ်
မျက်မြင်သက်သေတစ်ယောက်ကတော. " အရှက်သာရှိမယ်ဆိုယင်တော.အဲဒီအမျိူးသမီး
ဟာနောက်နေ.မနက်မှာလဲသေလိုက်မှာပဲ ၊ ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော.သူကအခုအပြာကားမင်း
သမီးဖြစ်သွားပြီလေ " လို.ပြောပါတယ်။
ရှေ.မှာဖြစ်ခဲ.တဲ.အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကိုဂျပန်လူမျိူးခရီးသွားတွေကတော. live show
ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ.လိုက်ရတဲ.အသက် ၄၄ နှစ်ရှိ Mark Robinson ကပြောကြားရာမှာ
လူငယ်တစ်ချိူ.ကပါအော်ဟစ်အားပေးကြတယ် ။ သူတို.ကတော.ဘယ်သူ.ကိုမှဂရုမစိုက်
ပါဘူး။ မြက်ခင်းပေါ်မတက်ရ ဆိုတဲ.ဆိုင်းဘုတ်ကိုတောင်အလေးမထားတာပါ ။ ဓါတ်ပုံ
တွေတစ်ဖြတ်ဖြတ် ၊ ဗီဒီယိုတွေတစ်ရုန်းရုန်း ၊လူတွေတစ်ဝုန်းဝုန်းနဲ.ပေါ.ဗျာ" လို.ပြော
ဆိုတာဒါမျိူးပေါ. ... သူတို.သာအရက်မမူးပဲသာမာန်အခြေအနေမျိူးမှာဆိုဒီလိုမျိူးဘယ်
THESE are the brazen bonkers who had sex on the Queen’s front lawn at Windsor Castle.
Posh blonde Joy Taylor, 35, and balding romeo Phil Carden, 30, are both high-flyers in business. The pair were seen laughing on the steps of Joy’s West London flat.
But both fear they could lose their jobs after police caught them romping while Her Majesty was in residence at one’s favourite home.
They stripped for action after an all-day booze bender in which they sank champagne and wine in the Royal town’s bars.
Their 20-minute sex session — in front of 100 tourists — happened days after high-flying businessman Phil split with his pretty fiancée Lucy Meredith.
Nurse Lucy, 29, had accepted Phil’s proposal of marriage afterasix-year romance.
And she had been organising their big day when their relationship hit the rocks.
Both American-born consumer internet expert Joy and balding Phil fear losing their jobs after their steamy “performance”.
Posh Joy is thought to beafreelance consultant toamajor London firm. Before that she worked for insurers Mondial Assistance and mobile giants Vodafone.
Fitness fanatic Phil isa£50,000-a-year operations director for top recruitment firm Antal International of Warrington, Cheshire.
He splits his time between his £200,000 semi in Ellesmere Port, Cheshire, and London.
The randy pair spentanight in police cells after being arrested by Royal Protection Squad officers while they were still at it.
In the morning they were cautioned for outraging public decency.
On Tuesday night they were seen arriving hand in hand at Joy’s plush rented mansion flat in West London.
Phil, who was pictured checking his mobile, left in the early hours.
A RANDY couple were nicked as they hadasteamy sex session — on the Queen’s front lawn.
Crowds of astonished tourists watched as the drunken pair stripped and got down and dirty onaprivate grass bank at Windsor Castle, where Her Majesty was in residence.
They kept at it for 20 minutes before armed Royal Protection Squad officers stepped in to take down their particulars.
The pair romped in daylight beneath the castle’s Garter Tower, in full view of hotels, pubs and shops over the road. Some onlookers cheered them on while others shouted “disgusting” and called cops.
Several Japanese tourists FILMED the session, giving running commentaries to their instant “blue” videos.
And last night the couple — described by police as respectable people with respectable jobs — were said to be “mortified” by their actions.
The lust-filled lovers were aged in their early 30s. After stepping on the grass bank the man peeled the trousers off the attractive blonde woman, then dropped his.
The pair were soon writhing, moaning and groaning — unconcerned by the 100-odd people watching.
Whoops from some spectators alerted Irish Guards sentries, whose barrack room overlooks the lawn.
“They even ignored the Please Keep Off The Grass signs.
“A few soldiers were geeing them on from above and plenty of young people did the same from the roadside. There were camera flashes going off and people videoing.” The two protection squad officers arrived in an unmarked Range Rover, accompanied byapolice car.
They confronted the couple, who were still going. Mr Robinson said: “The officers told them to stop and the sight of the uniforms seemed to snap them out of it.
He was not at home last night. And when phoned by The Sun he claimed we had the wrong number. Butapal said: “He’sasmoothie with an eye for the girls and what happened doesn’t surprise me.”
A neighbour told how he read The Sun’s story about the castle romp — “and cannot stop laughing knowing it was Phil”.
Posted by Unknown | at 9:01 AM | 1 comments
အတိတ်ရဲ.အရိပ် (၀ဋ်ကြွေးကြမ္မာ ၊ မမှီပါခဲ.)
Posted by Unknown | at 9:08 PM |0comments
Biggest king kobra
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကရာလာပြည်နယ် ကန်နာဒေသမှာ မတ်လ ၇ ရက် နေ.ကဖမ်းမိတယ်
ဒီမြွေကြီးကိုဖမ်းမိတဲ.သူကတော.မစ္စတာစရီးနတ် ဖြစ်ပြီးသူ.ကိုNational Geographic
Channel အတွက်သဘာဝတောရိုင်းတိရိ စ္ဆာန်အချက်အလက်စုဆောင်းရေးသတင်း
ဒီမြွေကြီးကတော.အလေးချိန် ၃၅ ကီလိုရှိပြီး အရှည်ကတော. ၃.၈ မီတာပါတဲ.ခင်ဗျာ...
မြန်မာကျူးပစ်မှဆောင်းပါးရှင် Zuka ထံမှခွင်.တောင်း၍ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်။
THIS IS THE BIGGEST KING KOBRA EVER FOUND IN THE WORLD..
AND COUGHT IN ARALAM FARM(AROUND 55 KM EAST OF KANNUR TOWN ,
NEAR IRITTY) IN KANNUR DISTRICT, KERALA , INDIA ON 07/MARCH/2009.
THIS PERSON WHO CAUGHT HIM LIVE IS Mr. SREENATH AND HE IS SELECTED IN
THE WILDLIFE ADVENTURES CREW IN N.G.C(NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL)
THEY CALL HIM AS " THE EMPEROR " THIS WILL BE TELECASTED ON
"28/MARCH/2009 8:30 PM IST ON NGC................
IT"S WEIGHING AROUND 35KGS AND ITS 3.8MTRS LONG........
Posted by Unknown | at 8:46 PM |0comments
Danwei လို.အမည်တဲ.၀က်ဆိုဒ်မှာတင်ထားတဲ.ကြော်ငြာအရ Jin Tai Cheng ဆောက်
လုပ်ရေးကုမ္ပဏီက Ecological Bay လုံးချင်းအိမ်ယာစီမံကိန်းကလုံးချင်တိုက်တွေကိုဝယ်ယူမယ်.
ကြော်ငြာထားတာကတော. " အိမ်ဝယ်ဖို.စိတ်ကူးစီစဉ်နေသလား? ငယ်ရွယ်လှပတဲ.ဇနီးလောင်း
လေးနဲ.အတူခန်းဝင်လက်ဖွဲ.ပါပေးနိုင်မယ်.အစီအစဉ်နဲ.ကြိုဆိုပါရစေလား " လို.ဆိုပါသတဲ...
အရောင်းစာရေးမလေးတွေကတော.အိမ်အရောင်းအ၀ယ်အတွက်ကော်မရှင်ကအနေနဲ. ၈ ရာခိုင်
အိမ်ခြံမြေအရောင်းနှုံးဟာ မနှစ်က ၁၉.၇ ရာခိုင်နှုံးအထိကျဆင်းခဲ.ရတယ်လို.သတင်းများက
လွန်ခဲ.တဲ.နိုဝင်ဘာလကတော.တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ.ယွမ် ၄ ထရီလီရမ် ရှိတဲ.စီးပွားရေး
ပါဘူးလို. Huayuan အုပ်စုရဲ.ဥက္ကဌမစ္စတာရန်ကျီချန်းကပြောဆိုခဲ.ပါတယ်။
မူရင်းသတင်းလေးကတော.အောက်ပါအတိုင်းပါ။စင်္ကာပူက The New
That's the bizarre sales pitch ofaBeijing-based property developer struggling to combatasevere market slump in China that has seen home sales and prices plunge.
Posted by Unknown | at 10:28 AM | 1 comments
Labels: ဗဟုသုတဆောင်းပါး၊source:ွှ့The New Paper
Smoke or Get Burnt: Chinese County Tells its Offic...